Xiddigo muhiim ah oo ka maqanaan doona kooxda Man City kulanka ay maanta la leeyihiin Crystal Palace ee Premier League – Gool FM
Xiddigo muhiim ah oo ka maqanaan doona kooxda Man City kulanka ay maanta la leeyihiin Crystal Palace ee Premier League
Haaruun Yuusuf May 6, 2017
(Manchester) 06 Maajo 2017 – Afarta ciyaaryahan ee kooxda Manchester City ee kala ah Sergio Aguero, David Silva, John Stones iyo goolhaye Claudio Bravo ayaa seegi doona kulanka ay kooxdooda Sky Blues maanta soo dhowayn doonto Crystal Palace ee Premier League sida uu shaaciyey Sky Sports.
Aguero ayaa dhaawac looga saaray kulankii ay todobaadkii hore la yeesheen Middlesbrough kaasoo u muuqday inuu ahaa dhaawac gumaarka ah, isla markaana u baahan waqti uu ku soo kabsado sidaas darteed sooma laaban karo kulanka maanta oo waa uu seegayaa.
Silva, kaasoo aan ciyaarin tan iyo dhaawacii jilibka ka soo gaaray kulankii FA Cup ee ay guuldarrada kala kulmeen Arsenal ayaa tababarka kooxdiisa dib ugu soo laabtay Khamiistii, laakiin Sky Sports ayaa sheegaysa inuu isaguna seegayo kulanka ay maanta wajahayaan kooxda tababare Sam Allardyce.
Macallin Pep Guardiola ayaa hadda haysta Gabriel Jesus oo taam ah kaasoo laga yaabo inuu ku soo bilaabo safka hore kulanka maanta ee Palace, laakiin Pep waxa uu sheegay in Aguero uusan haysan wax fursad ah uu ku ciyaaro kulanka maanta.
Dhinaca kale goolhaye Claudio Bravo ayaa sidoo kale ka maqnaan doona Man Ciy kulanka Palace, waxaana laga yaabaa inuu xitaa seego inta ka harsan xilli ciyaareedkan.
Goolwalaha reer Chile ayaa garoonka laga saaray kulankii ay usbuucii hore la dheeleen Manchester United, kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray Kubka qeybtii labaad kulankii barbaraha goolal la’aanta ah ku dhammaaday ee ka dhacay garoonka Etihad.
Difaaca kooxda Manchester City ee John Stones ayaan sidoo kale la heli doonin kulankan oo aan diyaar ahayn, laakiin waxa uu soo laaban karaa ka hor kulanka ugu dambeeya xilli ciyaareedka oo ay Man City la dheeli doonto kooxda Watford.
Ciyaaryahannada u sharraxan abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa bishii April ee Premier League oo la shaaciyey
Ronaldo oo markale laga reebay safka Real Madrid ee kulanka caawa...(Aqri liiska la magacaabay)